काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बिष्णु रिमालले बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तका हत्यारा पत्ता लाउनु पानी तताएजस्तो काम नभएको बताएका छन् । उनले यो काम बिजुलीको स्वीच दवाएजस्तो सजिलो नभएको बताउँदै सरकारको आलोचना गर्नेहरु एउटै बिषयमा अल्झिरहेका तर सरकार भने धेरै काममा व्यस्त रहेको पनि बताएका छन् ।
निर्मला पन्त प्रकरणका कारण सरकारको आलोचना भइरहेको छ । सरकार कमजोर भएको हो ?
सरकारको आलोचना गर्नेहरु एउटै विषयमा अल्झिरहेका छन् । तर सरकार धेरै विषयमा काम गर्दै छ । सबैखाले समस्या समाधान गर्दै देश विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
निर्मला पन्तको बलात्कारीलाई सरकारले कहिले पक्राउ गर्छ त ?
यो पानी तताएजस्तो होइन । स्वीच दबाएजस्तो पनि होइन । प्रहरी प्रशासनले अनुसन्धान गरिरहेको छ । जतिबेला सही अपराधी पत्ता लाग्छ, त्यसबेला सार्वजनिक गरिहाल्छ । अब निर्मला पन्त प्रकरणका दोषी चाँडै नै पत्ता लाग्छन् ।
रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले त हत्यारा पक्राउ परिसक्यो भन्नुभएको थियो नि ?
त्यो त मिडियामा आएको कुरा हो । के कसो हो बुझौँला । समातिएको भए पनि विधि पुर्याएर बाहिर आउँछ । नसमातिएको भए समातिन्छ । अनुसन्धान भइरहेकाले अहिलेलाई यति मात्रै भनौँ । प्रहरी प्रशासनलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी बोल्न थाल्यौँ भने अनुसन्धानमा समस्या हुन्छ ।
अन्तर प्रदेश परिषदको बैठकको उपलब्धि केके हुन् ?
दुइ दिन मन्त्रीहरु, मुख्यमन्त्रीहरु र प्रधानमन्त्रीसहित परिषदको बैठक बस्यो । बैठकमा समस्याहरुको पोको खोलियो । ती समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन गरिएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयमा समस्या देखिएको कतिपयको तर्क छ । संघीयताले सरकारलाई समस्या नै निम्त्याएको हो त ?
संघीयता त कार्यान्वयनमा आइसक्यो नि । प्रणालीलाई लेखाजोखा गरेर हुँदैन । संघीयता खर्चिलो भयो भनेर जनतामा भ्रम छर्ने काम भइरहेको छ । संघीयता र संविधानका विरोधीहरु बोलिरहेका छन् । तर हामी संघीयतालाई सफल बनाउँछाँै ।
अहिलेको सरकारले विकास निर्माणको सवालमा प्रभावकारी काम गर्नै सकेन भन्ने पनि आरोप छ नि ?
विकास निर्माणका कामको थालनी भएको छ । एकैपटक सबै काम त हुँदैन नि । सरकार ठीक दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको छ ।
तपाईंको पार्टीभित्र विवाद बढ्दै गयो । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले त प्रधानमन्त्रीले पार्टी चलाउनु हुँदैन भन्नुभयो । बैठक पनि बहिष्कार हुन थाल्यो । समस्या चुलिएको हो ?
नारायणकाजी श्रेष्ठ बैठक छोडेर हिँड्नुहुन्छ । बैठकमा राख्नुपर्ने कुरा रेडियो र टेलिभिजनमा भन्दै हिँड्नुहुन्छ । यो त पार्टीविरुद्ध भइहाल्यो नि । उहाँ प्रवक्ता हो हाम्रो । प्रवक्ताले त विधि सिकाउनुपर्यो । भएका निर्णय सार्वजनिक गर्नुपर्यो । बैठक छोडेर हिँड्नुहुन्छ । बैठकमा के निर्णय भयो थाहै पाउनुहुन्न । हाम्रो प्रवक्ताजीको तरिका ठीक भएन ।
सत्तारुढ दलकै प्रवक्ताले सरकारको आलोचना गर्दा कस्तो प्रभाव पर्छ ?
गलत भयो भने त सबैले आलोचना गर्नुपर्छ । सरकारलाई ठीक ठाउँमा ल्याउनका लागि जसले पनि सुझाब दिनसक्छ ।
तर प्रवक्ताको मात्रै कुरा होइन नि, सचिवालय बैठक त चारजना नेताहरुले बहिष्कार गरेका छन् ?
केही केही साथीहरुलाई के रमाइलो लाग्छ कुन्नी बैठक छोडेर हिँड्नुभयो । किन छोड्नुभयो थाहा पनि छैन । अब स्थायी समितिको बैठकमा थाहा होला । अहिले त मिडियाबाट मात्रै थाहा पाएका छौँ । सबैले आफ्नो जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्यो । ठूलो पार्टीका प्रवक्ताहरुले त विधि मिलाएर बोल्नुपर्छ नि । अरुलाई दोष लाउँनुभन्दा पहिला आफू ठीक छु कि छैन भन्ने ख्याल गर्नुपर्छ ।
केपी ओलीको बैठकमा समयमै नपुग्ने बानीले बहिष्कार गर्नुपरेको भनेर त प्रवक्ताज्यूले भनिसक्नुभएको छ त । बैठक पनि पार्टी कार्यालयमा राखिएन भन्ने गुनासो छ ?
प्रवक्ताले भन्ने भनेको त पार्टीले निर्णय गरेका कुराहरु हो । चित्त नबुझेको कुरा त बैठकमा बसेर भन्नुपर्छ । बाहिर गएर भन्दै हिँडेर त समस्या समाधान हुँदैन नि । उहाँलाई यस्ता कुरा भन्दै हिँड्नलाई प्रवक्ता बनाइएको होइन । यदी छाडा छारष्ट ढंगले जाने हो भने त अर्कै तरिकाको पदमा बसे भइगयो नि । उहाँ त हाम्रो पार्टीको प्रवक्ता हो । विधिअनुसार चल्नुपर्यो नि । स्वाद लाग्यो भन्दैमा जे पनि बोल्दै हिँड्न त भएन नि । यो त अराजकता हो । तर उहाँलाई सांगठनिक पद्धतिबारे थाहा पनि छैन । पहिला उहाँको पार्टीको संगठन नै अराजक थियो ।
तर बामदेव गौतम, झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालको पनि त असन्तुष्टी छ नि ?
मैले ठूला नेताहरुको विषयमा कुरा गर्न मिल्यो र ? मेरा वरिष्ठ नेताहरुले भनेको कुराप्रति म टिप्पणी गर्न सक्दिन ।
(रिमालले नेपाली रेडियो नेटवर्कसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)
२०७५ मङ्सिर २५ मंगलबार १३:१०:०० मा प्रकाशित